Dhawaaqyada Dhiilada Iyo Dhibta Xanbaarsan ee Ay Ciro Iyo Ina Biixi Yoonis Safiirada Nairobi Fadhiya ula Tageen Ma Xal baa Mise Waa Naxli Horle | Marsa News
Dhawaaqyada Dhiilada Iyo Dhibta Xanbaarsan ee Ay Ciro Iyo Ina Biixi Yoonis Safiirada Nairobi Fadhiya ula Tageen Ma Xal baa Mise Waa Naxli Horle
December 8, 2019 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Wadani Mmd, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro oo uu wahelinayo Maxamed Biixi Yoonis ayaa si wada jira kulano gaar gaar ah Nairobi kula qaatay wakiillada Midowga Yurub iyo danjire ku xigeenka wadanka Mareykanka.
Gudoomiye Ciro Iyo Maxamed Biixi Yoonis ayaa masuuliyiintaa beesha caalamka ee ay luanada la qaateen kala hadlay arimo dhaawac iyo dhiilo ba xanbaarsan oo qaranka somaliland sumcad dil ku ah.
Sida ay xaqiijiyeen wararka labadan siyaasi la xidhiidha, waxa ay dublamaasiyiinta beesha caalamka u sheegeen in madaxwayne biixi dalka ka ridayo dagaal sokeeye, isagoo dhamaystiraya ayay yidhaahdeen dagaaladaii 1994-kii, waa sida ay u sheegeen wakiilada dawladaha reer galbeedka e.
Maxamed Haaruun Biixi. ayaa sheegay in gudoomiye ciro oo ay nairobi ku kulmeen uu uga waramay waxii ay ka wada hadleen wakiilada beesha caalamka ee ay kulanada la qaateen waxaanu qoraal ay qortay shabakada Sayruuqnews, ku sheegay sidan.
Gudoomiye Cirro oo 2017 ay iigu dambaysay iyo team kiisa ayaa aan galabta Nairobi kula kulmay. Xataa marar dhawr ah oo labadaas sanadood ee aan hawlaha xisbiga ka sii maqnaa aan Hargeysa tegay, ma aanu kulmin oo safarro debedda ah ayaa uu ku maqnaa. Waxa uu iiga warramay dooddii isaga iyo Maxamed Biixi Yoonis ay ula tegeen wakiilada waddamadii dhawaan soo saaray qoralkii cambaaraynta ahaa ee ka dhashay tasarufaadka sharci darada ahaa ee Madaxwayne Biixi iyo saxiibkii Kaahin ay waayadan dambe ku kaceen. Waxa ay u sheegeen daneeyayaasha arimaha Somaliland, ujeedka Muuse Biixi in aanu ahayn wax doorasho iyo arimo farsamo oo lagu kala duwanyahay ku saabsan ee ay tahay dagaal doon. Waxa ay dublamaasiyiinta u sheegeen in uu Muuse si qorshaysan uga shaqaynaayo, sidii uu ku abuuri lahaa fursad uu dagaal waddanka kaga dhaco, oo uu isku dayo in uu gaadho ujeedooyin uu ka gaadhi waayay dagaalkii 1994. Safiirada wadamada Yurub iyo ku xigeenka safiirka Maraykan ee Nairobi jooga ba warkaas ayaa ay u faahfaahiyeen, wadamadii ay la kulmeen na waxa ay go’aansadeen in ay bishan December 18 keeda wafti Hargeysa u diraan, kuwaas oo laba maalmood waddanka joogi doona. Waddamada ay la kulmeen waxa ay u cadeeyeen, in aanay xajadu ahayn marnaba doorasho la isku diidanyahay, because khilaafaadkii ku saabsanaa Gudiga doorashada waxa la dhameeyay bishii July ee sanadkan, kolkaas oo la isla meel dhigay wixii la isku diidanaa, ka dib na uu Muuse furfuray wixii oo dhan.
Hadaba waxa suaal mudan halkee ayay ka keenen ciro iyo ina biixi yoonis in madaxwaynuhu dalka dagaal ka ridayo, waa maxay se ujeedooyinka uu ka gaadhiwaayay madaxwaynuhu dagaalkan ay sheegayaan ee 1994-kii?
Jawaabta suaashaasi waxa aan u dhaafayaa akhristayaasha, balse waxa aan la hilmaami karin in labadan masuul ee xisbiga waddani hogaankiisa ahi ay yihiin kuwo iyagu dalka dhibkiisa iyo burnurkiisa u tafaxaydan oo balo aan jirin u sacabo tumaya.
Somaliland shacbigeedu maaha kuwo lagu beer laxawsan karayo dhibaatooyin dhacay tagtadii ina dhaaftay, mana aha kuwo maanta diyaar u ah waxan ay ciro iyo ina biixi yoonis wadaan, somaliland waa dal iyo dad isu tashaday oo beesha caalamka markooda horeba u dhibane ah oo waxii ay xaq iyo xuquuq ugu lahaayeen ka waayay, taasi oo ah qirista in somaliland ay tahay qaran jira, mana mudna kuwo loo cabasho tago balse somaliland waa umad dhexdeeda ka arinsata hadba waxii jira.
Arinta dacwada ma dhalayska ah ee aan garaadka miyirka qaba ka soo bixin ee beesha caalamka ay la hortageen labadan shaqsi miyaan la odhan karin waa mid lagu wiiqayo wada jirka bulshada iyo xasiloonida dalka, waaba haday se u suurto gasho e’ waxse aan muran ku jirin in xisbiga waddani aanu ahayn mid horayso iyo danbaysaba dalkan iyo dadkan jiritaankooda jecel.
Waxa aynu la wada soconay in ergo dhexdhexaadin ah oo iskeed isku xilqaantay kana koobnayd ganacsato iyo culimo-diin ay wada hadalo ka dhex wadeen dhinacyada khilaafka siyaasadeed ka dhexeeyay oo ay qaybta u wayn ka ahaayeen xisbigan waddani ee nairobi dacwada la tagay iyagoo waliba dacwadoodiina noqotay midka noocaas ah, ergada dhexdhexaadintu maxay ka gar niqi doonta marba hadii uu waddani jabiyay wada hadaladii oo uu ka fad kudiyay meel aan looba fadhiyin.